देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी सदस्यता/सहयोग – Deshbhakta Loktantrik Party
Phone : 01-4375781
Email : deshbhakta1Loktantrikparty@gmail.com
नेपालभित्र र बाहिर रहेका १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली/गैर आवासीय नेपाली नागरिकले अनलाइन सेवाबाट वार्षिक सदस्यता शुल्क बुझाएर या अनलाइन सेवाबाट बुझाउने स्थिति नभएमा फारममा उल्लेखित “पछि बुझाउनेछु” विकल्प रोजेर सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। फारममा सदस्यता नलिएर आर्थिक सहयोगी वा स्वयंसेवीमात्र हुने विकल्प पनि प्रदान गरिएको छ।
सवारी चालक अनुमती पत्र
तपाईंले के उद्देश्यका लागी यो फारम भर्न लाग्नु भएको हो?
हाल रहनुभएको देश
अस्थायी ठेगाना छ?
कृपया प्रदेश छनोट गर्नुहोस्
पहिला प्रदेश छनोट गर्नुहोस्
पहिला जिल्ला छनोट गर्नुहोस्
तपाईंलाई पार्टीको कुन ठाउँमा काम गर्न रुची छ?
जेष्ठ नागरिक संगठन
हप्तामा केही समय
१५ दिनमा केही समय
महिनामा केही समय
अहिले निर्णय गरेको छैन
समय दिन सक्दिन
नेपाल प्रति वर्ष नेरु १००
अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड तथा सिंगापुर प्रति वर्ष ६० अमेरिकी डलर
वार्षिक सहयोग गर्छु
मासिक सहयोग गर्छु
अहिले एक पटक सहयोग गर्छु
सामान सहयोग गर्छु
सदस्यता बिस्तारमा सहयोग गर्छु
प्रदेश / जिल्ला / स्थानिय तहलाई सहयोग गर्छु
रकमको मुद्रा खुलाउनहोस्
आफन्त वा साथीले दिनुहुन्छ
पछि बैंकमा जम्मा गरेर खबर गर्नेछु
पछि आँफै आएर दिन्छु
आफन्त वा साथीको नाम
तपाईं कुनै पनि वैध (सम्बन्धित देशमा स्वीकृतिप्राप्त) मनि ट्रान्सफर एजेन्सीबाट हामीलाई रकम पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी रकम पठाउँदा दुईवटा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो, मनि ट्रान्सफर एजेन्सीलाई काठमाडौंमा पार्टीका लेखा अधिकृत को सम्पर्क नम्बर (+977..........) दिनु पर्नेछ। रकम पठाएको जानकारी तपाईंले Bimal जीलाई फोनमा या funds@delopa.org मा इमेल गरेर दिनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो, मनि ट्रान्सफर एजेन्सीले मानेको खण्डमा तपाईंले सो एजेन्सीलाई सीधै हाम्रो खातामा रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। खाता विवरण निम्न अनुसार छ:
सदस्यता/सहयोग रकम दाखिला गर्नका लागि खाता विवरण निम्न अनुसार छ:
खातावालाको नाम: देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी
एकाउण्ट नम्बर: ..........
शाखा: Chabil, काठमाडौं
सो एजेन्सीले भौचर भर्दा ‘रकम जम्मा गर्नेको नाम’मा मनि ट्रान्सफर एजेन्सीको नाम नभई चन्दादाता (तपाईं) को नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। रकम जम्मा भएको जानकारी तपाईंले परिस्कृत +97700000000 मा फोन अथवा funds@delopa.org मा इमेल गरेर दिनु पर्नेछ। यदि तपाईंले फोन गर्नु भएन र भौचरमा दाताको नाम स्पष्ट भएन भने हामी सो रकमलाई ‘अज्ञात दाता’को सूचीमा सुचिकृत गर्नेछौं। यसबारे अन्य प्रश्न भए हामीलाई माथि दिइएका नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले गर्नुभएको सहयोग र लिइदिनुभएको कष्टका लागि धेरैधेरै धन्यावद!
यदि तपाईंको बैंक खाता छैन भने हामी तपाईंलाई सानै रकमको किन नहोस् बैंक खाता खोल्न प्रेरित गर्दछौं किनभने सम्भव भएसम्म सबै नागरिकको बैंक खाता हुनु राम्रो हो हाम्रो मान्यता रहेको छ। हाम्रो खातामा जम्मा भएको रकमबारे बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणमा दाताको नाम स्पष्ट भएन भने हामी सो रकमलाई ‘अज्ञात दाता’को सूचीमा सुचिकृत गर्नेछौं। यसबारे अन्य प्रश्न भए हामीलाई 01-000000 या 000000001 मा फोन गर्नुहोला।
एकाउण्ट नम्बर: ०000000000000
जरूरी: तपाईं कुनै पनि अनलाइन सेवा प्रदायक या ब्याङ्कसँग अनलाइन भुक्तानीका लागि रजिस्टर्ड हुनुहुन्न भने माथि “अनलाइन भुक्तानी” बाहेकको विकल्प रोज्नुहोला। तपाईंले नेपाली बाहेक अन्य मुद्रा छान्नु भएको छ भने त्यसलाई "लगभग" विनिमय दर (Average Conversion Rate) को हिसाबमा नेपाली रूपियाँमा परिवर्तित गरिने छ र त्यसै अनुरुप रकम भुक्तान हुनेछ। तर हामी नेपाली ब्याङ्क र अनलाइन सेवा प्रदायकबाटमात्र अनलाइन रकम भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्छौं।
म १८ वर्ष पुगेको नेपाली/गैर आवासीय नेपाली नागरिक हुँ। म सरकारी कर्मचारी होइन। मलाई नेपालको कानूनले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न कुनै प्रतिवन्ध लगाएको छैन। म कुनै ब्यांकको ऋण नतिरेका कारण या कुनै अन्य आरोपका कारण कुनै संस्थाको कालो सूचीमा परेको छैन। म भ्रष्टाचारको अभियोग या अन्य कुनै अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएको या छानविन भैरहेको व्यक्ति होइन। यहाँ लेखिएका सबै बुँदाहरु मेरा हकमा सही छन्। आज पश्चात् म मेरो ठेगानामा, इमेलमा र फोनमा पार्टीले आवश्यक ठानेको जानकारी उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्दछु।
रकम भुक्तान गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
सम्पर्क - फोन नं. : 01-4375781
ठेगाना : Kathmandu, नेपाल
Tweets by Deshbhakta19
© 2020 DESHBHAKTA LOKTANTRIK PARTY. All Rights Reserved. Designed by PKBK
© २०२० delopa.com सर्वाधिका र सुरक्षित